नेपालमा भेटियो नयाँ चरा, के हो नाम ? « Salleri Khabar
नेपालमा भेटियो नयाँ चरा, के हो नाम ?
५ असोज, मुस्ताङ । नेपालमा पहिलो पटक युरोपेली रोलर नामको नयाँ चराको प्रजाति रेकर्ड गरिएको छ । नयाँ प्रजाति उक्त चरा माथिल्लो मुुस्ताङ, लोमानथाङ गाउँपालिका–५ स्थित अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको तीन हजार ७८१ मिटरको उचाइमा रेकर्ड गरिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले आज जनाएको हो ।